Ra’isulwasaarihii hore ee Dawladda Fedaraalka ah Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa si kulul uga hadlay qaraxii qasaaraha badan dhaliyay ee maalinkii shalay ahaa ka dhacay wadada Maka Al-mukarama.
Waxaa mudane Saacid Shirdoon uu aad u cambaareeyay kooxihii nabadiidka ahaa ee geystay qaraxaas, waxaana uu qaraxaas ku tilmaamay mid waxashmnimo ah oo geysteen dad cadow iyo makasba ah oo aan marnaba ogalayn nabadda iyo hurumarka shacabka soomaaliyeed.
Waxaa Ra’isulwasaarihii hore ee Mudane Shirdoon uu tacsi tiiraanyo ah u diray dhamaan shacabkii ku geeriyooday qaraxaas, isagoo intii ku dhaawacanteyna eebbe ugu baryay inuu u booga-dhayo, isla markaana ehelada dadkaas eebbe ugu baryay inuu samir iyo iimaan waafi ah kaa ka siiyo.
Dhinaca kale waxaa Mudane Shirdoon uu laamaha amniga ee Dawladda Fedaraalka ugu baaqay, kana codsaday inay sameyaan u kuurgal iyo baaritaano adag oo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyay qaraxaas.
Waxaa ugu dambayn uu Mudane Shirdoon shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay xoojiyaan midnamadooda, si wadar ahna isaga qabtaan kooxaha nabadiidka ah ee caqabadda ku ah nolasha iyo xasiloonida bulshada soomaaliyeed.